One D အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Liam Payne နဲ့ Cheryl Cole တို့ လမ်းခွဲကြတော့မှာလား
On February 19, 2018 February 20, 2018 By fairy
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး One Direction လို့ပြောလိုက်ရင်မသိသူမရှိခဲ့တဲ့ Boy band ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ Liam Payne ဟာ သူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် လမ်းခွဲကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။
Liam ဟာ Cheryl နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ စတင်တွဲခုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်မှာ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ Bear Grey Payne လို့ခေါ်တဲ့ ၁၁လအရွယ် သားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ Cheryl ဟာ Liam မတိုင်ခင်မှာ အိမ်ထောင်၂ဆက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး Liam ထက်လဲ အသက်ဆယ်နှစ်ကြီးပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်တော့ သိပ်ချစ်ကြပြီး အဆင်ပြေသလိုထင်နေရပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ သူတို့က အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားညှိနှိုင်းပြီး နေနေကြရတာလို့ အတွင်းလူတစ်ယောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။
#FiftyShadesFreed promo in Paris ?
A post shared by Liam Payne (@liampayne) on Feb 5, 2018 at 12:37pm PST
Liam ဟာလတ်တလောမှာလဲ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Fifty shade of freed ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဝင်သီချင်းဖြစ်တဲ့ For You သီချင်းကို Rita Ora နဲ့တွဲဖက်သီဆိုထားပြီး ဒီရုပ်ရှင်အတွက်လုပ်သမျှ promotion တွေကိုလိုက်တက်ရောက်နေရပါတယ်။ ပြဿနာက အဲ့ဒီမှာ စပုံရပါတယ်ရှင်၊ Liam က အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အလျောက် နိုင်ငံတကာကိုသွားပြီး ဖျော်ဖြေနေရတော့ မိသားစုနဲ့ Cheryl အတွက် အချိန်မပေးနိုင်တာတွေ ရှိမှာပါပဲ။ Cheryl အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လဲ အဆိုတော်ဖြစ်သလို နာမည်ကျော်အဆိုတော်ကို ချစ်သူတော်ထားရတော့ အဲ့တာတွေကို သိပြီးသားဖြစ်သလို နားလည်ပေးဖို့လဲ ကြိုးစားရှာပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါ သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာလား? ဆက်ပြီးမခံစားနိုင်တော့တာလား မသိရပေမယ့် လမ်းခွဲဖို့ တောင်းဆိုထားပုံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အချိန်တော်တော်များများ ဝေးကွာနေရသလို မနှစ်က ဒီဇင်ဘာလောက်ကစပြီး ၂ယောက်သားအတူတူရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေ မရှိသလောက်နည်းခဲ့တာမို့ အဲ့အချိန်လောက်ကတည်းက အက်ကြောင်းတွေပိုကြီးလာပုံရပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာတက်တဲ့ပွဲတွေမှာလဲ Cheryl မပါဘဲ Liam တစ်ယောက်တည်း ပွဲတက်လာခဲ့တာတွေကိုလဲ မြင်နေရတော့ ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေဟာ ယုံရမလိုမယုံရမလိုပါပဲ။ Liam အနေနဲ့လဲ Cheryl ကိုချစ်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်အချိန်တွေပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာတွေရှိခဲ့သလို ကွဲဖို့အထိမစဉ်းစားပဲ အတတ်နိုင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင် အချိန်လုံးလုပ်နေခဲ့တာပါလို့ သူငယ်ချင်းတွေဆီကတဆင့် သိခဲ့ရပါတယ်။
Happy Valentine’s Day @cherylofficial and everyone. looks like I’ve got the big guy to compete with now ??‍♂️???
A post shared by Liam Payne (@liampayne) on Feb 14, 2018 at 11:09am PST
ပြီးခဲ့တဲ့ Valentine’s day တုန်းကတောင် Liam ရဲ့ Instagram မှာ Cheryl အတွက် Valentine post တစ်ခု တင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ Fan တွေကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေတာမြင်ချင်ကြပြီး Liam ကို Cheryl နဲ့သာအမြန်ဆုံး အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပါလို့ အားပေးနေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းအစား အခုလိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းကြားရတော့ အားလုံးက အံ့အားသင့်နေကြရပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းလေးကမှာ release လုပ်ခဲ့တဲ့ For You ရဲ့ MTV နဲ့ Late night show မှာဖျော်ဖြေခဲ့တုန်းကလဲ Liam နဲ့ Rita Ora ဟာနမ်းခဲ့သလိုသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရိုက်ကွက်တွေကြောင့် Liam တစ်ယောက်ဘာလုပ်နေတာလားဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက သို့လောသို့လော ဖြစ်နေရတဲ့ကြားထဲ ခုလိုသတင်းထွက်လာတော့ Liam အတွက်တော့ ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလိုဖြစ်နေရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ Liam တစ်ယောက် သူချစ်တဲ့ Cheryl နဲ့အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ myanmargroove ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်……
PREVIOUS POST Previous post: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူးခြားဆုံးနဲ့ ရင်အခုန်ရဆုံးသော The Voice Myanmar 2018
NEXT POST Next post: Taylor နဲ့ Bieber တို့ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် နာမည်ကြီးလာရတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေ